जब कालो झन्डा बन्नेछ मछिन्द्रनाथको भोटो
कानुनी राज भएको देशमाहरेक काम कानुनी हुन्छचाहे त्यो तिम्रोसम्पत्ति नै लुट्ने काम किन नहोस् !हो, अब नयाँ कानुन आएपछितिम्रो घर फोड्ने काम वैध हुनेछतिम्रो जग्गा लुट्ने काम वैध हुनेछअवैध हुनेछ त केवल आफ्नै सम्पत्ति बचाउने तिम्रा प्रयासहरु मात्र । पानीका देवता हुन् रातो मछिन्द्रनाथकानुन आएपछिपानी दिने मछिन्द्रनाथको काम पनि अवैध हुनेछअब पानी मछिन्द्रनाथले होइनसरकारले नै दिनेछदमकलको फोहरा मार्फत ।
आत्मकथा : कति प्रासंगिक !
लेखक कुमार नगरकोटीको उपन्यास ‘मिस्टिका’ मा दुई पात्रहरू ‘टेलिफोन’ यानिकी निशाचर लेडी र ‘टाइपराइटर’ यानिकी दिवंगत बुढाथोकीबीचको एउटा संवाद छ  । एक प्रसंगमा पात्र निशाचर लेडी भन्छिन्, ‘जीवनीलाई एउटा ज्यादै निम्नकोटिको बदनाम नाम दिइएको हुन्छ, आत्मकथा  ।
रातो बाकससँग यात्रा
त्यस साँझ लगातार बजेको फोनको घण्टी विष्णुले उठाउन पाएनन्  । दिनभरिको तातो घाममा खटिएका विष्णुलाई के थाहा मरुभूमिको देशमा कहिल्यै नउठ्ने गरी निदाउँछु भनेर ! १२ कल बजेको फोन नउठेपछि सँगैका साथीले छाम्दा पो थाहा पाए विष्णु त सकिएछन्  ।
गितार, ब्लू एप्रोन र देवदूत
झ्यालखानाभोड्का बुबाको फेभरेट दारु थियो  । त्यही दारु पिउँदै उहाँले एक साँझ भन्नुभयो, ‘हेर नाथे कुमार ! मेरो सरुवा भइरहन्छ  ।